I-Intelligence Intelligence, i-GIS yoshishino - iGoffumed
NgoJanuwari, 2009 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, ezintsha, GIS asibonise
Ndiyibonayo unyaka odlulileyo, ngabahlobo be-geofumed ngelixa besenza inkqubo yeqela lebhanki lamazwe ngamazwe. Ngokukodwa, kwaba malunga nokuguqula iakhawunti yamakhadi-ngetyala, okwakungumngcwabo ocinga ukuba iadesi zabhalwa phantse kwi-rock art.
Kodwa isiphumo sokugqibela sasisilungiselelo esilula samagosa asebhanki, apho banokubuza imibuzo efana nale:
Imephu yeendawo zokuhlala ngenxa yobundlobongela obuphezulu
Iindawo ezifanelekileyo zokufakwa kwee-arhente zenkonzo
Iindlela zokusabalalisa zeengxelo zeakhawunti
Iindawo ezikhangayo ekukhuthazeni iimveliso ezintsha
Oku kubizwa ngokuba yi-"Intelligence Intelligence", engenanto ngaphandle kweenkqubo ezihlalutya iimpawu ezithile kwi-fly kwaye ziboniswe kumaphu epeyinti. Inzululwazi ayikho kwi-GIS kodwa kuhlalutyo olukhokelela ekudaleni imigaqo yeendlela, ngoko kufanelekile ukuba ukwazi i shishini, amaxesha, iimveliso ezibonelelwa, abathengi kunye neemeko zengingqi.
Ndiyakhumbula ukuba isakhiwo multilayer ezenziwe ngabahlobo bam ababhemayo, babezikrini kumanqanaba ahlukeneyo:
Umphathi wokuthengisa: Iphaneli yokulawula imilinganiselo yokulinganisa, njengamaphesenti amkelekileyo okuchaneka, imigaqo yokukhetha amakhasimende, iinjongo zokuthengisa, ukuhlengahlengiswa kunye nokubeka iiparameter zokumisa ...
Iingcali zeGIS, isikhombiselwano esine-GUI asibonise Kwaye kwakuchumile kakhulu, kuba oomatshini babecala kuphela i-geolocated umthengi ngamnye omtsha, wenza iindawo ezintsha, njl njl.
Kubaphathi, ikhonkco abanokubonwa kuyo, ukuthelekisa ukuthengisa kunye neenjongo, wenze izicwangciso zomsebenzi kwaye ufumane iingqalelo zeempumelelo okanye ukulibaziseka.
Ngokuqhelekileyo zibizwa ngokuba yiNgcaphephe yoBuchule ekusebenziseni ulwazi malunga nokulawula izigqibo. Njengoko kuya kuba:
Kutheni kukho ininzi yolwaphulo-mthetho evela kule ndawo?
Uphi indawo efanelekileyo yokuthengisa kuyo?
Ziziphi iingongoma ezifanelekileyo ze-antenna zamaselula?
Ubungakanani ubunzima bokuhlawula ummelwane ngamnye kulo phuculo?
Kuvela phi ukuthengisa kwethu?
Kutheni kule koloni sinabantu abaninzi abaxhamlayo?
Ubunzima beli yilokuba kufuneka luhlelwe, kwaye kubiza. Akulindeleke ukuba uhlalutyo ngalunye umqeqeshi we-GIS uza kwenza iimephu ezidweliswe kwaye umphathi wokuthengisa uza kuhlaziya imigaqo ebekwe ngayo. Kule nto, yiyo yeendlela ezibuyisela iziphumo ezisetyenziswayo, kwaye apho iiparitha zingenziwa ngokwezifiso.
nembeko ezi quijotes ubugcisa, wakwazi ukuba ukukhumbula malunga IMS ukwenza iingongoma ezintsha ukusuka isicelo web, ukwenza izinto ezifakelwa e Oracle database ubuninzi sazilahlekisa kubhabho i freshened.
Siyazi ukuba i-ESRI inesicelo salezi njongo zibizwa Uhlalutyo loShishino, kodwa kule ngxaki ndifuna ukuthetha malunga nesicelo esishiye samchukumisa kunye nesicelo endifuna ukugqiba eso sithuba; Kubizwa ngokuba yiMephu Intelligence, eyenziwa yi-Integeo, inkampani ephuma kuyo e-Australia kodwa ngeenkonzo kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, kuquka iMelika ne-Spain.
Yintoni Integeo ngantoni na
I-Plugin ukudibanisa i-MI in Excell !!!
Ukuba yi-Excel isicelo sokusetyenziswa okuthandwayo, ezi zenze i-plugin evumela ukuxhuma kwi-data okanye igcinwe kwi-Excel okanye kwisiseko sangaphandle, kwaye udlale kunye nekhonkco ebonisa iziphumo ezicacileyo ngokuphathelele ulwazi olukhoyo.
Kunokwenzeka ukuba udlale kunye nokuxhaswa kweendlela, ukusondela, ukuhamba, ukuvala okanye ukuguqula. Idatha ingabonakaliswa kwiphepha le-ArcIMS okanye isebenze kwenye indawo kunye nemigangatho ye-OGC njenge-Manifold, i-ArcGIS Server, Geoserver ...
Idibanisa izicelo zeGeospatial and Reporting.
Imephu Intelligence uye zonxibelelwano izicelo geospatial ezifana ESRI, MapInfo, Geoserver kwaye idibanisa kunye neengxelo MicroStrategy kunye izicelo, Oracle / Hyperion, IBM / Cognos, SAS, SAP, Izinto Business, Actuate okanye eyenziwe Eclipse.
Ngokutsho kweendaba zakutshanje, i-Sun izuze le mveliso ukudibanisa i-Hyperion kwi-ESRI, eya kuba nesicelo esisebenza kwiJava, ngoko kwi-Mac kunye ne-Linux.
Ekugqibeleni ke ndicinga le ndlela isicelo entle yayintle ngakumbi kuba nangona ojolise iimveliso ekupheleni GIS, wayethimb data moya ezizodwa yenza iziphumo ngaphandle imfuneko yeendleko eziphezulu kuphuhliso.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, yiya Integeo wa Integeo Iberia.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ezinye iiplagi ezixhamlayo zoBhaliweyo abaBomi
Post Next Geofumed, unyaka omtsha, ubuso obutshaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "kwi-Intelligence Intelligence, i-GIS yoshishino"
Mario Doñè Montalvo uthi:
Ndihlala ndifuna ukudibanisa ne-geofumed